कसरी स्मार्टफोन चयन गर्न
तपाईं एक स्मार्टफोन किन्न अघि, तपाईंलाई आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न। स्मार्ट फोन रिचार्जिंग बिना साधारण फोन धेरै सुविधाहरू, स्क्रिन आकार, सञ्चालन समय फरक। तपाईं बस कलको लागि फोन आवश्यक छ भने, स्मार्टफोन को धेरै कार्यहरु तपाईं सजिला मा आउन सक्नुहुन्छ।
अधिक यो ठूलो भन्दा बजार मा स्मार्टफोन को विकल्प mmicenter.ru साइट मा देख्न सकिन्छ। तपाईं धेरै सामान हराएको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बिक्री सलाहकार जो फोन चयन गर्न तपाईं सल्लाह गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले पालन गर्न निश्चित छ एक निश्चित बिक्री लक्ष्य, किनभने तपाईं आफ्नो सल्लाह भर हुँदैन। त्यसैले, तिनीहरूले तपाईंलाई स्वीकार गरेनन् mozzhet एक फोन सल्लाह गर्न सक्छन्। एक विकल्प बनाउन राम्रो।
यो धेरै मापदण्ड, तपाईं एक विकल्प बनाउन सक्षम हुने निम्न जोड गर्नुपर्छ।
2) ह्यान्डसेट ब्रान्ड
3) संचालन प्रणाली
4) पर्दा आकार। सुविधाहरू स्क्रिन।
लागत र निर्माता लागि फोन कम्पनी छनौट अघि, यो स्मार्टफोन लागि प्राविधिक मापदण्ड थाहा आवश्यक छ किनभने गरेको, सञ्चालन प्रणाली सुरु गरौँ।
सञ्चालन प्रणाली (ओएस)। यो स्मार्टफोन आफ्नो कम्प्युटर को सुविधाहरूमा पनि त्यस्तै हो। संचालित स्मार्टफोन सञ्चालन प्रणाली, फोन आदेश प्रदर्शन गर्छ। धेरै सञ्चालन प्रणाली, तर बजार लोकप्रिय3अपरेटिङ सिस्टम, तथाकथित ओएस बजार को "तीन स्तम्भहरु": आइओएस, एन्ड्रोइड, विन्डोज फोन।
आइओएस - सञ्चालन प्रणालीमा स्मार्टफोन ब्रान्ड एप्पल -iPhone मात्र स्थापित छ। यो राम्रो डिजाइन र तपाईंले यो स्मार्टफोन प्रयोग आनन्द गर्न मद्दत गर्नेछ ग्राफिक्स संग धेरै सुविधाजनक अपरेटिङ सिस्टम छ। यो मंच लागि आवेदन धेरै सुविधाजनक छ। नियम, ग्राहकहरु sots.setey आवश्यक कार्यक्रम, रोमाञ्चक खेल पहिलो यो OS अन्तर्गत देखियो। तर यो "pirated" उत्पादन देखि कम गर्छ नगर्ने ती मानिसहरूलाई चेतावनी गर्न आवश्यक छ। सबै अनुप्रयोगहरू, संगीत को लागि, चलचित्र एक विशेष भर्चुअल स्टोर iTunes स्टोर मा सबै यो खरीद, भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ। इन्टरनेटबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न र डाउनलोड यो स्मार्ट फोन काम गर्ने छैन।
एन्ड्रोइड - सबैभन्दा लोकप्रिय ओएस छ। यो अपरेटिङ सिस्टम बजार मा वर्तमान जो स्मार्टफोनहरू, को बहुमत मा स्थापित छ। ओएस को मुख्य प्लस - यो खुलापन, विकासकर्तालाई लोयल्टी छ। यो अपरेटिङ सिस्टम लागि नयाँ आवेदन पनि एकदम छिटो देखिन्छन्। यो OS अलिकति डिजाइन iOS'u मा कमसल छ। एन्ड्रोइड स्मार्टफोन को एक ठूलो संख्यामा स्थापित गरिएको छ, फलस्वरूप, मूल्य दायरा एकदम उच्च छ, र तपाईं एक उपयुक्त एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
विन्डोज फोन (WP) - माइक्रोसफ्ट द्वारा उत्पादित ओएस छ। यो तेस्रो हर एक ठाँउ अपरेटिङ सिस्टम छ। यो प्रणालीको लागि आवेदन पछि देखिन्छन्। यो प्रणालीको लागि एक हडताली डिजाइन द्वारा विशेषता छ। यो सिस्टम ustapaet र iOS र Android को सुविधा।
स्क्रिन आकार। स्क्रिन साइज स्मार्टफोन लागत निर्भर हुनेछ, र समय काम र तिनीहरूलाई प्रयोग सुख।
ठूलो पर्दामा लागि Chase छैन। ठूलो स्क्रीन एकदम असहज संग फोन प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले किन्न अघि, "हात मा" एक स्मार्टफोन केही मिनेट थियो आफ्नो हात मा उपकरण पकड मेनू स्क्रोल, आवेदन गर्न राम्रो छ। तपाईं प्रयोग समयमा बेचैनी महसुस भने, यो यस्तो फोन लिन छैन भन्दा राम्रो छ।
खरीद गर्नु अघि तपाईं फोनमा पिक्सेल को घनत्व ध्यान गर्नुपर्छ। भण्डारमा, हुँदा पनि तपाईं स्मार्टफोन रोज्न, कि फोनको स्मृति छ Yutuba देखि यो एक भिडियो वा एक खोल्नुहोस्।
Protsessor.Ne protsessere मा "कोर" को एक ठूलो संख्या द्वारा झुक्काएका। यो एक निर्णायक कारक छैन। को स्मार्टफोन ओएस को rapidity गुणस्तर थप निर्भर गर्दछ।
त्यसैले, हामी मूल्य र ब्रान्ड गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
लागत स्मार्टफोन धेरै भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
1) सस्तो (3500 देखि 7500 पी) गर्न। यो मूल्य दायरामा, तपाईं एक औसत प्रोसेसर र38 megapiskesley गर्न क्यामेरा संग, एन्ड्रोइड ओएस वा विन्डोज फोन असल स्मार्टफोन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्ड फोन: सैमसंग, फिलिप्स, एलजी, नोकिया, फ्लाई, अल्काटेल।
(7500 देखि 15000 पी गर्न) 2) औसत। यो मूल्य दायरामा स्मार्टफोन पनि prodvinutnyh प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त हो। ओएस: एन्ड्रोइड, WP, iOS। यी स्मार्टफोन थप शक्तिशाली मा प्रोसेसर, स्पष्ट चित्र। को कोठामा 8 13 मेगापिक्सेलको। ब्रान्ड फोन: सैमसंग, फिलिप्स, एलजी, नोकिया, फ्लाई, अल्काटेल, लेनोभो, HTC, एप्पल।
3) महँगो (18,000 देखि 35000r गर्न)। म गुणस्तर, डिजाइन, शैली फोन प्रेम गर्नेहरूलाई martfon मा पैसा खर्च आपत्ति छैन। यी स्मार्टफोन Korpu उच्च गुणवत्ता र टिकाउ सामाग्री बनेको छ, अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर, स्पष्ट स्क्रीन, 8 13 मेगापिक्सेलको देखि एक क्यामेरा। निर्मित स्मृति अप 64 GB.Marki फोन गर्न: एप्पल, सैमसंग, HTC, नोकिया, एलजी।
यो बन्द छ भने कसरी आफ्नो फोन फेला पार्न: सल्लाह र राय
को आईफोन44S बाट आन्तरिक र बाह्य मतभेद
स्मार्टफोन Senseit E500: एक अवलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
स्मार्टफोन Highscreen हर्कुलेसक्लस्टर: समीक्षा, विनिर्देशों, मूल्यहरु
चिनियाँ आईफोन6"एन्ड्रोइड": समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों
फोन "नोकिया 300": सिंहावलोकन, विनिर्देशों र ग्राहक समीक्षा
घुमक्कड-छडी Geoby: बच्चाहरु र आमाबाबुको लागि स्टाइलिश सहायक लागि यातायात सहज माध्यम
"छिपछिपे हैल": अभिनेताहरु, प्लट, रोचक तथ्य
अनातोली Isayev, सोभियत फुटबल: जीवनी, मृत्युको कारण
माउंटेन बाइक MTB: एथलीट र एमेटेट्स को समीक्षा
को irradiator यूवी क्वार्ट्ज: छनौट र समीक्षा सुझावहरूको
"Arana" spokes: योजनाहरु र प्रदर्शन को सुविधाहरू
आहार कार्बोहाइड्रेट बिना - वजन गर्न प्रभावकारी तरिका
आफ्नो हातमा एक पटर गरेको पाङ्ग्रा बनाउन
बाथरूम मा निलम्बित छत कस्तो राम्रो प्रयोग?
घर मीठो दाँत: को वफल फलाम लागि आटा
समस्या वा समाधान - एक cynic गर्ने हो?
मेल सेटअप को iPhone मा "Yandex": systemic विधिहरू